ShanNail sticker mugadziri-Zvigadzirwa-Shanghai HUIZI digital
ShanNail mugadziri anonamirwa
Huizi Nail mugadziri anonamirwa
Shanghai Huizi Cosmetics Company yakazvarwa uye yakamisa rabhoritari yekutsvagisa manicure muna 2010. Tine kodzero dzakazvimirira dzepfuma mundima iyi, tichitarisa patsvakiridzo yemanicure, dhizaini, ODM uye OEM kwemakore gumi nerimwe. Zvigadzirwa zvepakutanga zvinosanganisira chinamira chezvipikiri, chinamira chezvipikiri, chitupa chemwana, uye zvimwe zvigadzirwa zvinotsigira manicure.
Tine 4000 square metres cosmetics yekugadzira yekuchenesa nzvimbo, kuiswa kweGerman 4-color yekudhinda muchina, Taiwan otomatiki screen yekudhinda muchina, Taiwan otomatiki kukuya nekucheka muchina, chiJapan chaiyo murabhoritari michina.
Parizvino tinoshandira vatengi nyika dzinopfuura makumi mana, senge Japan, United States, Italy, France, Germany, South Korea zvichingodaro. Kuburitswa kwepasi rose chinzvimbo, kunyangwe uchibva kupi, unogona kunakidzwa nacho.
Yako Yakavanzika Label Kadhi Yave Nzira
Hatidi kukunetsa futi. Saka, kuchengetedza nguva yako uye kukupa toni yemabhenefiti emari isu tinofara kukupa yakavanzika label kadhi. Tora maodha ako kazhinji achiunzwa muhuwandu uye usatarise dambudziko nezve chero chinhu.
Zvakazara Unique Visual Assets
Isu tichakubatsira iwe kusvika kune vanofarira uye vakapamhi siyana yevateereri kuburikidza neakasarudzika uye anoyemurika ekuona zviwanikwa. Munyika ino yedhijitari, mabhizinesi anonyanya kutsamira pazvinhu zvinoonekwa kuti vararame uye vabudirire.
Fekitari inonyanya kupa inotevera sevhisi
OEM zvigadzirwa zvakaitwa accroding kuchikumbiro mutengi
FOB uye CIF kutumira kana Airport kutakura
Chikwata chedu chekugadzira chinogona kukubatsira kupedzisa zvigadzirwa zvako artwork
Zvezvinhu zvakawanda, Tinogona kukubatsira kutumira kuAmazon FBA zvakananga
Fekitori inopa Yakagadzirirwa Dhizaini Nail Yakaputira Gel Polish Nail Sticker
OEM fekitori inopa yepamusoro zvipikiri polish mitsetse ZB akateedzana
2021 fashoni isiri yekunamatira mbambo mbambo mbambo zvipikiri jewelry KushongedzaCashoication
Korean Gel ChiPolish Nail Sticker Chaiyo Chipikiri Matanda Nail Art Kuputira Yakasarudzika dhizaini
2020 HUIZI Brand Nail inoputira Solid color Nyowani zvipikiri
2021 matsva masitayera ezvipikiri gel gel ine UV mwenje